Noforonina On Oktobra 31, 2019
Mba hanombohana amin'ny Easy Multi Display, mila mahazo antoka ianao fa mijoro tsara ny fitaovanao ary izany no izy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny rafitra farafahakeliny. Araho ity torolàlana eto ambany ity hahazoana antoka fa mandamina tsara ny solo-sainao ianao. Mba hahazoana tombony betsaka amin'ny Easy Multi Display dia amporisihinay ny fikirakira manaraka.
Solosaina solosaina mandeha Windows 10.
Kitendry sy totozy.
Karatra fakantsary afaka mampifandray fampisehoana marobe. *
* Jereo ny lahatsoratra tohanay momba izay ampiasana carte carteurs Eto.
FIFAMPIANARANA NY PC
Avy amin'ny kisary 4 ka hatramin'ny 5
Sary an-tsary: Nvidia GTX 1660 / AMD Radeon RX 580
Sary an-tsary: Nvidia RTX 1660 / AMD RX VEGA
Azoko ampiasaina ve ny solosaiko?
Angamba. Miankina amin'ny isan'ireo fahitalavitra mampiseho ny tianao hampiasaina.
Ny ankamaroan'ny solosaina ihany no manana adapters fampisehoana ampy (teboka fifandraisana ara-batana) ho an'ny 1 Aseho. Na izany aza, raha izany fotsiny no ilainao, dia mety hisy solosaina laptop mandeha Windows 10.
Raha ny finday yor vao haingana (Latsaky ny herintaona) ary manana kalitao avo lenta (€ 700 +) ary manana seranan-tsambo USB3, azonao atao ny mampiasa ity converter (USB3 mankany HDMI) ity raha te hampiditra fisisisy 1 na 2.
Teny fanalahidy hividianana an'ity vokatra ity: Converter HD3 HDMI
Ahoana no nahatonga ny Digital Signage ho lasa fitaovana ilaina amin'ny fifandraisana amin'ny 2021
Fikarohana signage nomerika ao amin'ny tontolo aorian'ny Covid
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny vahaolana nomerika nomerika sy ny fahafahany amin'ny orinasanao